Eddy Cue nyeredzi yeimwe okisheni kudya kwemasikati | IPhone nhau
Eddy Cue anotarisa mune imwe nguva yekutengesa
Isiri nguva refu yapfuura takaona kupera kwemakambani erudo akarongedzwa naCharitybuzz umo protagonist weiyechete aive mukuru mutevedzeri wemutungamiri wesoftware neInternet services yeApple, Eddy cue, uko mari yavakawana yakapihwa kuNational Basketball Coaches Foundation yeKansas City, Missouri. Zvekare uyu Apple executive anoonekwa pachiitiko kuti aise patafura imwe okisheni yakafanana kuti ubatsire chimwe chinhu.
Mune ino kesi, iri nezve kutsigira iyo Autism Movement Therapy mubatanidzwa, iyo sezvatinogona kuona isangano risingabatsiri iro rinobatsira vanhu vanotambura nehutachiona kana zvirwere zvinotorwa kubva mariri. Iwo mahofisi makuru esangano iri ari muVan Nuys, California.
Parizvino, iyo okisheni yakakosha pamadhora zviuru makumi mashanu kare ine bhidhi inosvika zviuru gumi nezvitanhatu Uye iyi okisheni ine nguva yakatarwa yaChikunguru 25, saka pane nguva yekusvika pamutengo unofungidzirwa uye pamusoro pezvose kuupfuura, zvinova ndizvo zvazviri. Mabhidi anogona kugadzirwa kubva pamadhora chiuru kusvika pamadhora chiuru, saka
Autism Movement Therapy, rave iro sangano rinogashira mari yakakwidzwa mune ino auction ye Charitybuzz uye mushandisi ane rombo rakanaka anokunda anozogona kusarudza zuva kubva Nyamavhuvhu 1, 2017 kusvika Chikumi 30, 2018 kusvika shanyira Apple's Cupertino nzvimbo, Apple Park uye unakirwe masikati akanaka uye kutaurirana nemukuru weApple. Chimwe chinhu chiri pachena chisingawanikwe kune vanhu vazhinji. Ndinovimba fungidziro idzodzo dzakapasiswa uye vanokwanisa kukwidza zvakati wandei kupfuura zvakatarwa, asi isu tichangoziva chete kuti kana bhidha rapera pawebhusaiti yeinisheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Eddy Cue anotarisa mune imwe nguva yekutengesa
Twitter inovandudza kuvanzika kwedu nekutipa kwakawanda kutonga pamusoro pezaziso
Samsung Galaxy S8 nhamba dzekutengesa dzinoramba dzakaderera maererano nevanoongorora